Discounts paJuuk mabhandi ezhizha rino | Ndinobva mac
Discounts paJuuk anosungira zhizha rino
Tambo dzeJuuk hapana mubvunzo chimwe chezvinhu zvinonakidza zveApple Watch pakati pevaya vari kutsvaga zvemhando yepamusoro zvigadzirwa, dhizaini yakanaka uye mutengo unonzwisisika. Iye zvino tambo dzemugadziri uyu dziri pamutengo kupemberera kusvika kwezhizha uye iwe unogona kuwana zvipo zvakanaka zveiyo Korza, Ligero, Velo uye Revo mhando.
Mamwe eaya maJuuk tambo takaedza kare kare ndiri kuMac uye tinogona kutaura kuti ndewemhando yepamusoro. Juuk ikambani diki inonyanya kugadzira maApple Watch bhendi.
ari Korzun kuti semuenzaniso ivo tambo yakasungirirwa yakagadzirwa neyeganda reItari iwo ane mutengo wekutengesa wemadhora makumi manomwe nemapfumbamwe uye nekutengesa kwezhizha ndewemadhora makumi mashanu nemapfumbamwe. Iwo mamodheru anowanikwa mukusimudzira aya ese ari 79 / 59mm uye 38 / 40mm.
Iwo maLigeros akagadzirwa nealuminium uye ivo vakatengwa pamadhora zana nemakumi masere nemapfumbamwe. Nekutengesa kwezhizha vanogara pa $ 119 uye vanowanikwa e79 / 42mm mamodheru muObsidian neCosmic Grey.
Kune rimwe divi tinosangana nekusimudzirwa kweiyo Velo modhi muna 42 / 44mm ine Silver finish. Etas nemutengo mumwe chete watinowana muLigero, kubva kumadhora zana negumi nemapfumbamwe kuenda ku119. Pakupedzisira iyo Revo, mamwe mabhandi ane simbi isina kupera inopera kubva pamadhora zana nemakumi mapfumbamwe nemasere kusvika pamakumi masere nemasere neshanu. . Unogona pinda Juuk zvinopihwa kubva paiyi link imwechete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Discounts paJuuk anosungira zhizha rino
Chinja yako AirPods Pro kuita iPod Classic nenyaya iyi kubva kuna Elago
Apple Girazi patent uye yakawedzera chokwadi